Maraykanka Oo Ka Baxaya Heshiiskii Nukliyeerka Ee Dawladaha Reer Galbeedku La Galeen IRAN | Himilo Media Group
USA, 9 Meey, 2018 (Himilo) – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii Nukliyeerka ee ay waddamada reer galbeedku la galeen Dawladda Waddanka Iran.
Mr Trump waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu cunaqabatayn hor leh ku soo rogi doona dalka Iran, oo uu ku tilmaamay inay argagixisada taageerto.
Madaxweyne Trump oo heshiiskaasi ku tilmaamay mid musiibo ah ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskaasi dhanka Nukliyeerka ee Iran aanu Iran ka hor istaageyn inay yeelato hub Nukliyeer ah, waxaana uu intaa raaciyay in heshiiskaasi uu yahay mid hal dhinac u xaglinaya oo xitaa haddii Iran ay u hoggaansato heshiiskaasi aanu wax nabad ah soo kordhin doonin.
Madaxweynaha Iran, Hassan Rouhani oo hadlay daqiiqado uun kadib markii Trump uu ku dhawaaqay go’aankaasi ayaa sheegay in Iran ay ku sii socon doonto heshiiska, oo halkaasi ay kasii amba qaadi doonaan iyaga iyo dalalkii kale ee qeybta ka ahaa heshiiska.
Hoggaamiyeyaasha dalalka Fransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa muddoyinkii dambe waday dedaalo ay ku doonayeen in Madaxweyene Trump aanu ka bixin heshiskaasi.
Hasa-yeeshee waxaan ilaa iyo imika aan kala caddeyn waxa xiga iyo tallaabada xigta ee ay qaadayaan dalalka qeybta ka ahaa heshiiskaasi, maaddaama Trump uu sheegay in sidoo kale cunaqabateyn ay ku soo rogi doono dalalka kale ee xidhiidhka dhaqaale la sameeya Iran.